စတီဖင်ဟော့ကင်း | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Tag Archives: စတီဖင်ဟော့ကင်း
Posted on August 20, 2014 by chitnge
သိပ္ပံပညာရှင်ဟော့ကင်း အပိုင်း(၂) သူသည် အိုင်းစတိုင်းပြီးလျှင် သူပဲဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ် ခံရသည်။ အိုင်းစတိုင်းကိုလည်း သူသည် အထူးဝေဖန်ခဲ့သည်။ အိုင်းစတိုင်း နှစ်ခါမှားခဲ့သည်ဟု သူပြောခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းကို အိုင်းစတိုင်း၏ (God does not play dice.) God သည် ကြွေအံမကစားပါ ဟူသောစကားအပေါ်မှာ အခြေပြု၍ ပြောခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Quantum Mechanics ၏အဖြေအရ သဘာဝသည် လျှိူ့ဝှက် လွန်းရာ (Black Holes) ထဲ၌ ဘာမှမလေ့လာနိုင်ကြောင်း သူသည် … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Myanmar Posts, စတီဖင်ဟော့ကင်း	| Leaveacomment
သိပ္ပံပညာရှင်ဟော့ကင်း အပိုင်း(၁) သိပ္ပံပညာရှင်ဆိုလျှင် ဤခေတ်၌ ရေပန်းစားသည်၊ ဟော့ကင်း ကတော့မူ အထူးရေပန်းစားသည်။ သူသည် သဘောတရားရေးရာ ဆိုင်ရာ ရူပဗေဒနှင့် စကြဝဠာဗေဒကို အထူးလေ့လာခဲ့သည်။ (Black Holes) တွင်းမည်းကြီးများသည်သူ၏ စွမ်းဆောင်မှုကြောင့် ပို၍ လူသိများလာသည်။ သူသည် အသက်ရှင်လျက်နှင့် သိပ္ပံပညာရပ်ကို ဦးဆောင် နေသည်မှာ အိုင်းစတိုင်း၏ နောက်ပိုင်းတွင် အထူးချွန်ဆုံး ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ခံရသူဖြစ်သည်။ သူသည် လွန်စွာကျော်ကြား အရောင်းရဆုံးသော စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကောင်းစွာရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ (A Brief … Continue reading →
God Particle ရူပဗေဒနှင့် စတီဖင်ဟော့ကင်း
Posted on December 5, 2013 by chitnge
God Particle ရူပဗေဒနှင့် စတီဖင်ဟော့ကင်း God Particle ကို တွေ့တာနဲ့ ရှုပဗေဒဟာ ပျင်းစရာကောင်းလာတယ်လို့ စတီဖင်ပြောတာ မဟုတ်သေးပါဘူး — God Particle ကို တွေ့တာက တွေ့တာပဲပေါ့၊ တွေ့လို့လည်း နိုဘယ်(လ) ဆုကို ရပြီးပြီပဲ။ God Particle ဆိုတာ God ကြီးကို တွေ့တယ်လို့ ပြောတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ အသေးဆုံးလို့ ယူဆရတဲ့ အမှုန်တစ်ခုကို နာမည်ပေးလိုက်တဲ့ သဘောပဲ။ ဒီတော့ ဘာပျင်းစရာ … Continue reading →
ကမ္ဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးသုံးဦး စိတ်ကူးဆင်တူနေကြခြင်းအကြောင်း ကမ္ဘာကျော် သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးများသည် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဟု ဖွင့်ဆိုရမည်လား၊ မပြောတတ်ပေ စိတ်ကူးများ တူညီနေကြကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြလိုပါသည်။ ရှေးဦးစွာ အိုင်းစတိုင်း၏ ကောက်ချက်ကို တင်ပြပါမည်။ အိုင်းစတိုင်းသည် သူ၏ (The Fundaments of Theoretical Physics) စာအုပ်တွင် နိဂုံးချုပ် အနေနှင့် .. .. the search for truth is more precious than its possession. .. .. … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, စတီဖင်ဟော့ကင်း	| Leaveacomment